Ducada Caruurta. ? Dhiigga Masiixa iyo Ruuxa Quduuska ah
6 Akhriska Min
Salaadda Caruurta. Iyagu waa sababta farxadda iyo murugada ugu weyn ee qofkasta dareemi karo. Tani waa sababta kor loogu qaado a u duceeya carruurta ilaa dhiigga Masiix iyo Ruuxa Quduuska ah waa wax aad caadi u ah.
Laga bilaabo waqtiga aan ognahay inay jiraan, Qalbigeennu waxaa ka buuxsamay walwal iyo dareenno kuwaas oo inta badan ay adag tahay in wax la sharxo.
Ku shubista walaacyadan oo dhan tukashada waa waxa ugu caqliga badan ee aan sameyn karno waalid ahaan markii aan soo bandhigo xoogaa walwal ah ama walwal badan.
Waqtiga xaadirka ah, marka khataraha ay u muuqdaan inay yihiin nidaamka maalintii iyo halka ay carruurta, gaar ahaan marxaladda hore ee dhalinyarada, uma muuqdaan inay rumeeyaan dhammaan waxyaabaha xunxun ee ka dabacsan deegaanka.
Tani waa sababta, in laga fogeeyo mamnuucida tan ama taas, waxa aad sameyn laheyd, oo aan ka aheyn waxbarashada wanaagsan, inaad ka dhigatid booskeena xiga salaadda.
1 Salaadda Caruurtu Salaaduhu waa mid awood badan leh?
1.1 U duceynta dhiiga Masiix ee carruurta
1.2 Baryada Ruuxa Quduuska ah ee carruurta
1.3 U ducee carruurta fallaagada ah
1.4 U ducee halyeeyada carruurta
2 Ma dhihi karaa 4 jumladood?
Salaadda Caruurtu Salaaduhu waa mid awood badan leh?
Akhristeyaasheena badankood ma oga haddii salaaduhu xoog badan yihiin.
Waxaa lagu yaqaanaa inay awood badan yihiin, xitaa kuwo aad u awood badan.
Salaadayada Iyagu waa asalka.
Waxay ka baxaan Kitaabka Quduuska ah, goobaha Kaniisadda Kaatooliga iyo ilaha aaminka.
Dhammaantood way xoog badan yihiin oo shaqeeyaan.
Sidaa darteed, haddii aad rabto duco xoog leh oo loogu talagalay carruurta, waxaad horey u ogtahay inaad 3 hoose ku leedahay. Iimaan weyn ku ducee. Had iyo jeer rumaynta awoodaha Eebbe. Marka ma aha inay khasaarto.
U duceynta dhiiga Masiix ee carruurta
Sayidow, Aabbaha Qaadirka ah, waxaan kaaga mahadnaqaynaa inaad na siisay carruurtan.
Farxad ayey noo tahay, welwelka, cabsida iyo daalka ayaa na qaaliya, waxaan ku aqbalnaa degganaan. Naga caawi inaan si dhab ah u jeclaano.
Adiga noloshaad ku gaadhay waad noolowday. Weligeed iyo weligeedba waad garanaysay oo waad jeclaan jirtay.
Na sii xigmad aan ku hagno sabir si ay u baraan feejignaantooda si ay ugu bartaan wanaagga tusaale ahaan.
Waxaad xoojisaa jacaylkeena si aan u saxno oo aan uga sii fiicnaano.
Way adagtahay mararka qaarkood in la fahmo inay ahaadaan sida ay annaguba doonayaan, inaan ka caawino sidii ay wax u sameyn lahaayeen.
Na bar aabbahaaga wanaagsan wanaagga Ciise ee wiilkaaga iyo Rabbigeenna.
Ma jeceshahay ducada ku socota dhiigga Masiixa carruurta?
In la yiraahdo dhiiga Masiixu wali wuu ku qulqulayaa iskutallaabta waa run inbadan oo dad badani kufsadaan shaki.
Si kastaba ha noqotee, dhiiggan ayaa wali jira mucjiso si weyn oo aan ahayn Kaliya waxay waxtar u leedahay nadiifinta dembiyadeenna Waxay kaloo naga caawin kartaa inaan xallino xaalad kasta oo soo kacda iyo wax ka sii badan haddiiba loogu talagalay carruurteenna.
Ciise, sida wiil wanaagsan, wuu garanayaa oo wuu fahmaa wax kasta oo carruurtu ku dhex mari karaan, waqtiyada oo dhan waxaa lagu tijaabin karaa inay sameeyaan waxyaabo aan iyaga u fiicnayn iyo inaysan aqoon ama rabin inay arkaan.
Waa kan waxaas oo dhan in weydiisashada dhiiga wax codsi kasta oo qaas ah ee carruurta ay tahay mid awood leh, marka lagu daro inay na siiso nabadda lagama maarmaanka u ah inaan sugno mucjisada, waxaan xasilloonaan karnaa inay taasi anaga naga caawin doonto iyo waqti dhow halkii aan ka arki laheyn waxaan dalbaneyno.
Baryada Ruuxa Quduuska ah ee carruurta
Sayidow, nuur ubadkayada carruurteenna si ay u ogaadaan jidkii aad iyaga u dooneysay, si ay kuu ammaanaan oo ay u gaadhaan badbaadada.
Iyaga ku hay xoog, si ay noloshaada ugu dhiirrigeliyaan himilooyinka Boqortooyadaada.
Nala socodsii sidoo kale, waalidiintaada, inay ka caawiyaan sidii ay u aqoonsan lahaayeen xirfadooda Masiixiyiinta oo ay si buuxdo u gudan doonaan, adigoo la kaashanaya dhiirigelintaada gudaha.
Markii Ciise jannada kor u qaaday wuxuu naga tegey Ruuxa Quduuska ah inuu noqdo shirkaddeenna weligeedba ilaa uu soo noqdo.
Ma jiro qof naga yaqaan annaga oo isaga ka wanaagsan, xitaa annaga nafteena.
Markii aan welwelsan nahay, ayaan is-muujinnay, markii aan u ooyeynay wiil awgood, Ruuxa Quduuska ahi halkaas wuu joogaa oo wuu na sii wadaa isagaana isaguna wuu daryeelaa wiilkaas meel kastoo uu joogo.
Aynu isaga weydiisanno kalsooni iyo kalsooni inuu nagu caawin doono oo uu wax walba ka qaadan doono qaansheegta ay tahay inuu yeesho, si dhakhso badan sida aan filayno.
U ducee carruurta fallaagada ah
Ilaahayow, waxaan kuu siinayaa carruurtayda; Them gave Adigu waad i siisay, oo weligaaba adigaa leh, Waan barayaa adiga Adiga oo waxaan kaa codsanayaa inaad u xafidato sharaftaada. Sayidow, yaanad damac, damac, shar, yuusan kaa leexin jidka wanaagsan.
In ay leeyihiin awooda ay ku kacaan waxa ka soo hor jeeda shar iyo in ujeedada falalkooda ay had iyo goor yihiin oo ay wanaagsan yihiin oo keliya.
Adduunyo badan baa shar leh, Sayidow!
Waad ogtahay sida aan u jilicsan nahay iyo sida sharku badanaa noo jecel yahay; laakiinse adigu waad nala joogtaa, oo carruurtayda adaan u hoos mariyaa.
Sayidow, iyaga dhulka korkooda, iftiin, xoog iyo farxad u reyreeya, si ay iyagu dhulka dhexdiisa kuugu noolaadaan, iyo in jannada, dhammaanteen, aan ku raaxeysan karno shirkadaada weligaaba.
Kacdoonka carruurta waa wax aan bilaabi karno in aan ka aragno tan iyo carruurnimada waana waqtigaas oo ah meesha aad ku bilaabi lahayd weydiiso caawimaad xaggaaga laga soo diray.
Marar badan annaga oo ah waalid ahaan waxaan u baahan nahay cinwaanka si aan u ogaano waxa la sameeyo iyo waxa aan la sameynin si aan u caawino kacdoonka carruurteenna ma ahan mid aad khatar u ah.
Dalbo a u duceeya carruurta caasiyiinta ah, laga bilaabo nafta si aan naloo siino xikmad iyo talo wanaagsan caruurteena waa waxa ugu fiican ee aan sameyn karno.
U ducee halyeeyada carruurta
Aabbo qaali ah iyo Rabbigeen, ducadan ku ducee Jacaylkaaga infinito si marka uu bushimahayga uga baxo ciidanka aan qalbigayga ka adkaan karin, dhammaan ciidammadaada samaawiga ahi waxay ka jawaabaan wicitaankayga iyagoo siinaya carruurtayda wax kasta oo ay uga baahan yihiin horumarkooda iyo farxaddooda.
Ku dabool salaaddaan daacadda ah jiritaankaaga hortiisa oo ha u oggolaanina xumaanta ama khaladaadkayga. Malaa'igta Malaa'igta Dib u Jecel ahu waxaan kuu yeedhay magaca Rabbiga inaad carruurtayda u qaadatid oo aad seeftaada kaga badbaadisid xumaanta oo dhan.
Iska yaree carqaladeynta iyo xirnaashaha, sii daaya oo sii iimaan adag si aysan waligood uga bixin jidka wanaagsan. Gacaliye Malaa'igta Gacaliye Jolete waxaan kuugu yeedhay adiga oo ku leh magaca Rabbiga inaad ku duubto carruurtayda iftiinka xigmadda.
Ka caawi inay si guul leh u horumariyaan hibadooda iyo kartidooda, kana fogeeyaan qaladka, xumaanta iyo jaahilnimada. Ku dhiirrigeli inay bartaan oo ay had iyo jeer ka adkaadaan oo ay caddeeyaan waddooyinkooda si ay u gutaan hawshooda oo ay ugu farxaan dhulka.
Gacaliye Malaa'igta Gacaliye Waan ku baryayaa magaca Rabbiga inaad carruurtayda jacayl uga buuxiso, oo qalbigooda u bogsiiso oo u oggolaatid inay ogaadaan Jacaylka runta ah oo xajiya.
Ka caawi inay ku noolaadaan si waafaqsan wax walba dunida oo waxaad siisaa awood ay ku naxariistaan ​​oo ay wax u jeclaadaan iyagoon daciif ahayn ama xumaan saamayn ku yeelanayn.
Iftiinka iftiimaya naftooda ha u baxo weligiis. Sidaasay u ahaanayaan barakada qoyskeenna iyo ammaanta Ilaah weligiis iyo weligiis.
Waxaa la sheegay in qof walba oo dunida jooga uu leeyahay malaa'ig loo xilsaaray, laakiin isku mid looma dhihi doono malaa'igta iyo inay ka tirsan yihiin darajooyin kale oo sarreeya oo ka dhex jira ciidanka samada.
Waxaan u isticmaali karnaa wakhti kasta oo baahi ah.
Dagaalyahannada, dagaalyahannada iyo asxaabteenna, Archangel-yada marwalba waxay diyaar u yihiin inay naga caawiyaan dagaalka aan kulano kuwa xooggayaga ah.
Arinka caruurtu waxba kama roonayn midkoodna si uu ula dagaallamo guusha meel kasta oo ubad u baahan yahay.
Ma dhihi karaa 4 jumladood?
Waxaad dhihi kartaa 4 jumladaha dhib la'aan.
Ducada carruurta loogu tala galay dhiiga Masiix, ilaa Ruuxa Qudduuska ah iyo Milatariga waxay u adeegtaa oo keliya inay ilaaliso oo ka soocdo carruurta dariiqyada sharka ah.
Sidaa daraadeed, kama baqeyso inaad sheegto dhamaan weedhaha maqaalkan.
Waxa ugu muhiimsani waa in la rumeeyo awoodda Eebbe iyo in la helo iimaan.
U soo ducee cabsi la'aan, si wanaagsan ayaad u ordi doontaa.